Oprah Winfrey oo nolosheeda lagu soo bandhigay madxafka Washington ee Mareykanka – Somali Integration Tv
Oprah Winfrey oo nolosheeda lagu soo bandhigay madxafka Washington ee Mareykanka
Oprah Winfrey, waxeey soo gudbin jirtay barnaamedkii caan baxay ”The Oprah Winfrey show”
Saxafiyada iyo barnaamij soo tebiyaha haweeneyda caanka ah ee Oprah Winfrey ayaa sooyaalkeed wax qabad ahaaneed muddadii ay ku jirtay howlaha saxaafadda, waxaa lugu soo bandhigaya madax ku yaala caasimadda Mareykanka ee Washington DC.
Madxafka loogu magac darray National museum of African American history and culture ee Washington oo la furayo maalinta jimcaha ayaa lugu soo bandhigi doona saddex qeybood oo ka mid ah sooyaalka Oprah Winfrey. Laga soo bilaabo carruurnimadeedii, halgankii dumarka madow ay ugu jireen la dagaalanka midabtakoor-ka dalkaasi.
Muuqaalo fiidiyow ah oo ku saabsan barnaamijyadeedii loogu magac darray “”The Oprah Winfrey show”,barnaamijyadaasoo ay xiran jiray dhar u qaas ah, shaqsiyaadkii ay ku casuuntay barnaamijkeedii muddadii uu jiray iyo xusuus qorkeedii intaba. Ugu dambeyntiina waxaa jira qeyb kale oo xagga dhaqanka ku saabsan oo madxafku soo bandhigi doono sida naadiga buugga ay sameeysay howlaha tabarucaadka oo ay gacan ka geeysatay iyo iyadoo ku deeqday adduun gaaraya 21 malyan oo doolar mdfaxfkan oo si rasmi ah albaabada loo furay sanadkii 2016-kii.
Sitv News Desk
Iswiidhan oo maanta looga dabaal dayo maalinta calanka
Muslimiinta Mareykanka oo aan ku qanacsaneyn “Afurka Trump” uu doonayo inuu u sameeyo